MUCJISO ayay dunida ku aragtay Islaam naceeb dartiis -Daawo Arintan | Gaaloos.com
Home » Layaab » MUCJISO ayay dunida ku aragtay Islaam naceeb dartiis -Daawo Arintan
MUCJISO ayay dunida ku aragtay Islaam naceeb dartiis -Daawo Arintan
Gabadh ku kelliyeysatay mudaharaad lagaga soo horjeeday Muslimka oo ka dhacay magaalada Michigan ee dalka Maraykanka, ayaa la kulantay wax aanay waligeed filanayn, kadib markii casuumaad loo fidiyey, laabtana geliyeen haween ka mid ah muslimiinta ay ku mudaharaadaysay daqiiqado ka hor.
Gabadhan ayaa kalideed ku dhiirratay mudaharaad, iyadoo sidata kaadhadh ay ku qornaayeen hal-ku-dhigyo ay islaamka kaga soo horjeedo, iyadoo qorshuhu ahaa in dad badan hortagaan masaajid ku yaal magaalada Michigan.
Haweenaydan oo mudaharaadkeeda ku guda jirta ayey u yimaaddeen haween Muslim ah oo si wanaagsan ugu asturan dharka qiima leh ee xijaabka, iyagoo kula dooday in ay khalad fahansan tahay Muslimka.
Sidoo kale, waxa cajiib noqotay nin Yuhuudi ah inuu u yimi gabadhan, kadibna ka codsaday in ay la hadasho, waxaanay ugu jawaabtay; “Halkan umaan iman adiga. Muslim ma tihid.” Kadib markii uu si maldahan ugu yidhi in laf ahaantiisu uu Muslim noqon karo, waxa ay ku qaylisay inuu ka fogaado, waddadana uga leexdo, iyadoo waliba la socodsiisay in asaxaabteedu mudaharaadkan ku wehelin doonaan, laakiin laf ahaantiisu uu u sheegay in asaxaab noqon karaan.
“Haddii aad Muslim tahay, kulama saaxiibi karo, mana aaminsani in Muslimku nabad leeyahay, waxaanan doonayaa in la joojiyo dadka kurka laga jaray,” ayey ku jawaabtay.
Ugu danbeyn waxay gabadhani u sheegtay ninkaas inay macluumaad ku saabsan mudaharaadkeeda ka heshay koox ay facebook kula asxaab tahay, balse ninkan oo u sheegay inuu Yahuudi yahay waxa uu u sharraxay in aanay diinta Islaamku fawdo ku dhisnayn.
Ugu dambayn, waxa gabadha loo sheegay in masaajidka loogu diyaariyey quraac loogu talagalay in ay cunto marka ay timaado, kadib markii ay la soo socodsiisay in ay mudaharaad ugu imaanayso dadka masaajidka ku sugan.
Waxa ay aakhirkii aqbashay, kadib marka ay ogaatay naxariista loo fidiyey in aanay khiyamo ahayn naxariista dadka Muslimka ah.
Sidoo kale, haweenka ay la kulantay ayaa u sheegay in la khalad fahansiiyey oo dadku xumaan iyo wanaag isugu jiraan. Gabadh ka mid ah haweenkaas, ayaa u tilmaantay in ay ka soo jeedo Mexico, maalin walbana ay aragto dadka daroogada ka ganacsada oo dad laaynaaya, kufsanaaya iyagoo aaminsan caqiida Kaatoliga (Catholic). Qof kale ayaa laf ahaantiisu uga sheekeeyey taariikhda Naasiga (Nazi) iyo siday dadka u xasuuqeen, iyagoo Kiristiyaan ah.
Waxa ay u sharraxeen in loo baahan yahay in si wada jir ah loogu mudaharaado kooxaha aaminsan in ay diin u dagaalamayaan ee aan la isku raacsanayn.
“Waxa aan ugu ducaynaya walaaladayda muslimka ah, waxaan doonayaa oo kaliya in dilka la joojiyo,” ayey tidhi gabadhan mudaharaadaysay ee hubka nacaybka laga baabi’iyey.
Sidoo kale, gabadh Muslimka ka mid ah ayaa ugu jawaabtay; “Qofna dooni maayo dil. Muslimka dhabta ah dil ma doonaayo, sida aan qofka Kiristaanka ah u jeclayn xasuuq.”
Aakhirkii waxa ay ku casuumeen dood ku saabsan arrimaha caqiidada oo ay ka qaybgalayeen, kadib markii ay dejiyeen, sawirrana waa ay la agashay, iyadoo sheegtay in aan qoyskeedu iyo saygeeduba doonayn in ay mudaharaadkan tagto, balse ay go’aankaas ku adkaysatay, balse ay kala kulantay wax aanay filayn oo aad u farxad geliyey.
Waxa kale oo aad u amakaagay nin boolis ah oo dibadda joogay, kadib markii uu arkay gabadhan oo masaajidka hore u gashay, isla markaana si cajiib ah loo salaamay, loona soo dhaweeyey.
Title: MUCJISO ayay dunida ku aragtay Islaam naceeb dartiis -Daawo Arintan